Ithegi: Iincwadi zokuthengisa | Martech Zone
Ithegi: Iincwadi zokuthengisa
Mhlawumbi kudala ndikumdlalo wentengiso. Kubonakala ngathi ixesha elininzi endilichitha kolu shishino, bambalwa abantu endibahloniphayo okanye ndibamameleyo. Oko akutsho ukuba andinabo abo bantu ndibahloniphayo, kungenxa yokuba ndiyadana ngenxa yabaninzi ababambe ukukhanya. Balumkeleni abaprofeti ababuxoki, abeza kuni ngezambatho zeegusha, ngaphakathi ke beziingcuka eziqwengayo. Mat. 7:15 Kukho izizathu ezimbalwa…
NgoLwesine, Meyi 26, 2016 NgoLwesibini, Juni 7, 2016 Douglas Karr
Kube lixesha elide kuba ndingumbhalisi oVakalayo kodwa ndisandula ukubuyela umva. Umxholo ovakalayo uquka ngaphezulu kwe-250,000 yeenkqubo zomsindo ezivela kubapapashi beencwadi ezikhokelayo, abasasazi, ukonwabisa, iimagazini kunye nabapapashi bephephandaba, kunye nabanikezeli bolwazi lweshishini. Kuyavakala ikwangumboneleli obalaseleyo weemveliso zegama elithethiweyo kwiVenkile yeTunes ka-Apple. Ndinexesha elininzi kakhulu lokumamela iincwadi ngelixa ndiqhuba okanye ndisebenza kunokuthatha ixesha lokuzifunda.
NgoLwesithathu, Aprili 13, 2016 NgoLwesithathu, Aprili 13, 2016 Douglas Karr
Ukuphunyezwa kwezicwangciso zokuthengisa ezinkulu kukulingana kwezinto ezininzi eziguquguqukayo. Ngaphandle kocwangciso olwaneleyo kunye neendlela zexesha elide, iinzame zentengiso ye-agile zinokuphazamisa uphawu. Kodwa iinzame ezicothayo nezibaluleke kakhulu zentengiso zinokumisa enye. Endaweni ethile embindini yimpumelelo, efuna ukuqhubeka kugxilwe kwiinjongo zexesha elide zombutho, kodwa ukuba nezixhobo ezinokuthi zitshintshe umkhombandlela kunye nesicwangciso ngexesha langempela njengoko iziphumo zisenzeka. Ndisandula ukugqiba ukufunda ubunini obugqithisileyo: Njani i-US Navy SEALs
Imithombo yeendaba yeNtlalontle kunye neMpumelelo: Ukusika ngokuThengisa
NgoLwesibini, Agasti 2, 2011 NgeCawa, Oktobha 4, 2015 Douglas Karr
Ininzi yempumelelo yentengiso yehla ize iye kwizenzo ezibini, ukusika kunye nokwandisa. Njengoko sibona isicwangciso sentengiso sisoma kwaye sivelise iziphumo ezimbalwa, sikhawulezisa ukusika… ngcono isicwangciso sethu sonke senza. Ngokunjalo, njengoko sibona isicwangciso-qhinga sivelisa iziphumo ezilungileyo… sisebenza nzima ukwandisa iziphumo. Njengomzekelo, ndizama ukwenza oku yonke imihla ngebhlog. Xa ndibona ukuba uninzi lwazo
Umthengi wethu, iWebtrends, uyaqhubeka nokuqhubela phambili neminikelo yabo kwaye ungene nzulu kwimithombo yeendaba zentlalo, iiapps kunye nohlalutyo. Namhlanje bakhulula iWebtrends yeNtlalontle. Bhalisela idemo ukuba ungathanda ukubona uphononongo olubanzi kunye nomboniso weWebtrends yeNtlalontle. IWebtrends yeNtlalontle ikhule ngokwaneleyo, kwindawo yentengiso yoluntu. IWebtrends yongeze amandla olawulo lwedonga, ukuvala isikhewu esibalulekileyo kunye namanye amaqonga osetyenziso kwimarike. Thumela uhlaziyo eludongeni lwakho kwi